သငျသညျတိကျတဲ့ကျွမ်းကျင်မှု၏နေအိမ်သို့၏ status ကို အသုံးပြု. ဗီယက်နမ်၏လက်ခံမှုသိလိုအခြေခံအသိပညာ
[တိကျတဲ့ကျွမ်းကျင်မှု] တည်းခိုခန်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နိုင်ငံခြားသားတွေ employ သလော ဒါဟာလိုအပ်ချက်ကရှင်းပြသည်နှင့်ဗီဇာရဲ့ contents စမ်းသပ်
တိကျတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုများ၏အိမ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း? တိကျတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဗီဇာနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများ employ နိုငျသောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများ
အဘယ်အရာကိုပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအထူးသဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း staffing သလဲ? သငျသညျစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီဖို့တောင်းနေကြတယ်
တိကျတဲ့ကျွမ်းကျင်မှု၏လက်ခံထားလမ်း! အာရုံကိုအမှတ်နှင့်နိုင်ငံခြားကလေးမွေးစားခြင်းစီးဆင်းမှု [ပြုခြင်းလမ်းညွှန်] ကရှင်းပြသည်
အခြေအနေများနှင့်စီးပွားရေးအကြောင်းအရာနှင့်စမ်းသပ်မှု - အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလယ်ပြင်၌တိကျသောကျွမ်းကျင်မှုနိုင်ငံခြားသားများကိုငှားရမ်းရန်
ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်နေအိမ်သို့ "တိကျတဲ့ကျွမ်းကျင်မှု" ၏နိုင်ငံခြား status ကိုငှားရမ်းဖို့? ဒါဟာအခြေအနေများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအကြောင်းအရာဖော်ပြထားတယ်
အင်ဒီးယန်းလူမျိုးများအတွက်လျှောက်လွှာတင်ခြင်းအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း | လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်စာမေးပွဲအမှတ်များ
သီရိလင်္ကာ Naturalization လျှောက်လွှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း | လိုအပ်သောပစ္စည်းများနှင့်စာမေးပွဲအမှတ်
ဂျပန်နိုင်ငံမှကိုရီးယားနှင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားပြုခွင့်လျှောက်လွှာများ | လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်စာမေးပွဲအမှတ်များ
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားပြုခွင့်လျှောက်ထားခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ | အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာစာရေးသူများသည်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်စာမေးပွဲအမှတ်များကိုရှင်းပြသည်။
Chinese Naturalization လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ | အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာစာရေးသူများသည်လိုအပ်သောပစ္စည်းများနှင့်စာမေးပွဲအမှတ်များကိုရှင်းပြသည်။
2019.10.30 ニュースリリース Ito တွင်ကျင်းပသောတည်းခိုခန်းများအတွက်“ နိုင်ငံခြားအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ” ကိုတက်ရောက်ခြင်း
2019.10.30 ニュースリリース အိုကီနာဝါတွင်ကျင်းပသောတည်းခိုခန်းများအတွက်“ နိုင်ငံခြားအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ” သို့တက်ရောက်ခြင်း
2019.10.17 ニュースリリース ကျနော်တို့ Wayby ကော်ပိုရေးရှင်းကနေအင်တာဗျူးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
2019.10.07 ニュースリリース Zao Onsen "နိုင်ငံခြားရေးအလုပ်အကိုင်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ" တွင်ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်ရေပူစမ်းတွင်ကျင်းပခဲ့သည့် Unazuki နေရာထိုင်ခင်းစက်မှုလုပ်ငန်း,
2019.09.19 ニュースリリース Hakone "နိုင်ငံခြားရေးအလုပ်အကိုင်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ" တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် Atami တဲ့ Metropolitan နေရာထိုင်ခင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စင်မြင့်